မိတ်ဆက် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
25 thoughts on “မိတ်ဆက်”
photharhtoo | October 4, 2008 at 5:39 pm
i amastreammone’ friend. Can I read your blog.I cant write but i want to read somebody poem.
uranusaquarian | October 4, 2008 at 6:30 pm
You’re welcomed from UranusAquarian!
Poem is the most valuable and graceful artwork of all arts. So, as far as I could, I’ll try to spread out verses. I’m not sure of modern-versed poem types, but lyric-typed may be acceptable, I hope. Thank you for your eagerness in Poems.
layma | November 1, 2008 at 3:38 pm
စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တော်တော် သဘောကျမိတယ်…။
တောကျောင်း | December 19, 2008 at 4:36 pm
ကုမ်ရာသီသူ | December 24, 2008 at 8:21 pm
အခုလို လာလည်ပြီး အသိအမှတ်ပြုသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ နောက်လည်း တစ်ခါက တချို့တလေကို တစ်ခါတစ်ခါ လာလည်ပါဦးမယ်။ ဆက်လက် ရေးသားဖို့ ကြိုးစားသွားပါ့မယ်ရှင်။
Republic | January 21, 2009 at 4:43 am
ကျနော် လည်း ၀ိုင်ကြိုက်တယ်ဗျ ၊၊ အနီရောင်ဝိုင် ကို ပိုနှစ်သက်တယ် ၊၊
ကုမ်ရာသီသူ | January 30, 2009 at 2:32 am
Mr. Republic ရေ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဘ၀ရော၊ ၀ိုင်ရော အချိုပြင်းပြင်း အခါးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါရဲ့။
MrDBA | January 30, 2009 at 4:23 pm
ဟိုမှာလာမေးထားတာ ဒီမှာလာဖြေသွားတယ် …
31 Jan 09, 00:18
MrDBA: uranus.saturn>> chrome ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်နားမှာ ဂွပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်
31 Jan 09, 00:19
MrDBA: uranus.saturn>> ပြီးရင် Drop down menu က Option->Minor Tweaks -> change font and language setting ကိုနှိပ်
31 Jan 09, 00:20
MrDBA: uranus.saturn>> ဖောင့်သုံးခုလုံး ဇော်ဂျီပြောင်း … ရသွားလိမ့်မယ်
ကုမ်ရာသီသူ | January 31, 2009 at 1:14 am
ကိုကြီး DB ကလည်း သူ့ဆီဗုံးမှာ အော်ခဲ့တာကို ဒီမှာ ဖြေတယ်လို့။ အဟီး။ ကျေးဇူး အထူးပါခင်ဗျာ။ ဒါနဲ့ အဲဒီလို နာရီတွေ၊ ရက်စွဲတွေပါ ပေါ်အောင် ဘယ်ကနေ လာဖြေသွားတာလဲဟင်၊ အဲဒါကိုပါ ဆီဗုံးမှာ လာအော်လိုက်မယ်လေ၊ ဒါပဲ။
ဂျစ်ပဆီလေး | February 7, 2009 at 1:04 pm
ကုမ်ရာသီသူ | February 7, 2009 at 2:24 pm
mirror | February 12, 2009 at 7:42 am
ကုမ်ရာသီသူ | February 12, 2009 at 9:30 am
ကြိုဆိုပါတယ် မကြေးမုံရယ် 🙂
Istein | February 16, 2009 at 1:54 am
အမက အရက်သမားလား ချဲသမားလား ဗေဒင်ဆရာမလား။ ဗေဒင်ဆရာမ ဆိုရင် ကျနော်ဘယ်နေ့ ထရီလျံနာ ဖြစ်မလဲ ဟောပေးတော့။ တကယ်ဖြစ်သွားရင် အမကို 1 Billion ဆုချမယ် ဟီးဟီး
ကုမ်ရာသီသူ | February 16, 2009 at 2:39 am
Istein ပြောသွားတာတွေကို ကြုံရင် ကြုံသလို အားပေးတယ်။ 😀 လေထိုးလေလျော် ဟောပေးလိုက်မယ် အမ ထရီလျံနာဖြစ်ပြီး နောက်နေ့ Istein အလှည့်ပဲ။
khet myint myint | March 8, 2009 at 2:46 pm
အန်တီကွန်ညွှန်းလို့ လာလည်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ wordpress.com ကမြန်မာစာ support လုပ်ပြီလား။ ကျနော်ဟိုးတုန်းကသိထားတာက wordpress.com ကပေးတဲ့ service မှာမြန်မာစာ support မပါဘူးဆိုလို့ပါ။
ကုမ်ရာသီသူ | March 9, 2009 at 4:44 am
ဟုတ်ကဲ့၊ Support လုပ်တယ်လို့ ထင်တာပဲခင်ဗျ။ ဒီစာမျက်နှာမှာ Font Embed မလုပ်တတ်တာရယ်၊ Default CSS ကို ဘာမှ ကလိခွင့်မရှိတာရယ်ဆိုတော့ သူတို့က service မပေးရင် ဒီမှာ မြန်မာလို ရိုက်လို့ ရမယ်မထင်ဘူး။ အခုထိတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်။ နောက် unicode တွေ၊ ဘာတွေ ရှိလာရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ လာလည်တာ ၀မ်းသာပါကြောင်း။
YoungGun | March 9, 2009 at 2:09 pm
ဘလော့မှာ ထူးခြားသလိုရှိတဲ့မှတ်ချက်လာရေးသွားတဲ့ အစ်မဆီ ပထမဆုံးအဖြစ်လာလည်မိပါတယ်။ နာမည်ကိုမြင်ဖူးတာကြာပါပြီ။ ရှင်သန်ခြင်းဘလော့လင့်မှာတည်းက တွေ့မိတာပါ။ အခုတော့ ပထမဆုံးရောက်ပြီပေါ့။ အစ်မနာမည်က ကုမ်ရာသီကို အပြည့်အ၀နီးပါး ဖော်ဆောင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြာ ယူရေးနပ်စ်က စနေပိုင်ရာသီကို လုယူသိမ်းပိုက်ပြီး ဒီလိုအမည်ဖြစ်လာတယ်လို့ လေ့လာဖူးပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက သာယနဆိုတဲ့ နေမင်းတည်ရာကို အသားပေးတဲ့ အနောက်တိုင်းစနစ်နဲ့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်တဲ့အတွက် ကုမ်ရာသီမစစ်မှန်ပါဘူး။ မြန်မာအပါအ၀င်အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ သုံးတာက နိရာယနစနစ်ဖြစ်ပြီး နက္ခတ်ကို အသားပေးပါတယ်။ သာယနနဲ့ နိရယနကြားမှာ ရက်နည်းနည်းကွာနေတာကလည်း ပြသာနာတစ်ရပ်ပါပဲ။ အင်း..တကယ်တမ်းပြောရရင် အဲလို ကုမ်ရာသီကြယ်စုထဲ နေမင်းဖြတ်သန်းချိန်မှာ တစ်လအတောအတွင်းမှာ လူထောင်သောင်းနဲ့ချီမွေးဖွားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီဖွားဟောကိန်းတွေဟာ ပညာရှင်စစ်စစ်တွေအတွက်တော့ ဟာသဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… အစ်မရဲ့ အရေးအသား၊ အတွေးအမြင်ကို လေ့လာဖတ်ရှုရင်း မိတ်ဆွေရင်းတစ်ယောက်လို အစပြုလိုက်ပါတယ်။
ကုမ်ရာသီသူ | March 10, 2009 at 1:30 am
ဟုတ်ကဲ့။ လူတွေနေတဲ့ကမ္ဘာမှာ လူတွေကပဲ လေ့လာမှတ်သား သတ်မှတ်ကြတဲ့ ရာသီခွင်တွေလို့ ကျွန်မ မှတ်သားမိပါတယ်။ ရောက်တတ်ရာရာ၊ စပ်စပ်စုစု၊ လတ်လျားလတ်လျား လျှောက်သွားနေတဲ့ ဘ၀လမ်းတစ်လျှောက် တွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့၊ ကြားဖူး၊ မှတ်ဖူးတွေကို ဒီလိုပဲ ရေးတတ်၊ တွေးတတ်သလို ရေးဖြစ်တာပါ။ လာရောက်ဖတ်ရှုသွားတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။
ye htut naung | March 17, 2009 at 8:01 am
လာလည်ပါတယ်ဗျာ..အခုတော့ အချိန်မရလို့ဒီ post တခုပဲကို ဖတ်ရသေးတယ်။ နောက်မှ လာဖတ်တော့မယ်။ stressful ဖြစ်တဲ့ ၀ိုင်တခွက် သောက်နေရင်း တန်းလန်းမို့ .. 🙂
ကုမ်ရာသီသူ | March 17, 2009 at 8:31 am
လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်။ Stress တွေ ဖြည့်ထားမိလို့ပဲ အဲဒီလို အပြင်းစားနာမည် ဖြစ်သွားသလားတော့ မပြောတတ်တော့ပါဘူး၊ အဲဒီနာမည်ကို Strong Ale အနေနဲ့ပဲ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အရက်ပြန်ကို ရေရောပြီး ရလာမယ့် အရသာလိုမျိုး ဖြစ်မသွားဖို့ပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 😀
ဘုန်းမြင့်သူ | March 17, 2009 at 11:33 am
၀ိုင်တော့ ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်။
အက်ဆစ်ဝိုင် တော့ ကျွန်တော် ကြောက်တယ်။
ကုမ်ရာသီသူ | March 17, 2009 at 4:46 pm
အဲ။ ၀ိုင်တို့၊ ဘီယာတို့မှာ Alcohol သာ ပါတာပါ။ Acid အဖွဲ့ကို ဆွဲမထည့်နဲ့လေ။ Alcohol က ရေရှည် ဒုက္ခပေးတာ။ Acid က မြန်မြန် ကိစ္စအေးတယ်။ နောက်ပြီး ကိုဘုန်းမြင့်သူရဲ့ ရှာပုံတော်အရေးက ရှိတယ်ဟုတ်။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်သတဲ့။ 😀
ခရောင်း | March 31, 2009 at 8:20 am
လာလည်တယ်နော်။ အားရင်လဲ သားသားဆီလာလာလည်။ နွေးထွေးစွာကြိုနေမယ်နော်။
ကုမ်ရာသီသူ | April 1, 2009 at 2:53 am
ကြိုဆိုပါ၏၊ ခရောင်းလမ်းမှာ လျှောက်ရတာ မောရင်လည်း ၀ိုင်လာသောက်ပေါ့ကွယ်။
မူးမူးနဲ့ဆေးလိပ်လေးဖွာ …..’ ဗဒင်သီချင်းပါ သတိရသွားတယ်